Amniga Qaranka – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
Xisbiga UPD wuxuu rumeysan yahay in sugidda amniga iyo badbaadada bulshada ay aasaas u yihiin horumarka dalka. Sidaas darteed, Xisbiga UPD wuxuu qabaa in dowladdu ay itaalkeeda isugu geyso sugidda amniga iyo badbaada shacabka.
Xisbiga UPD wuxuu qabaa in Soomaaliya aysan u baahneyn ciidan aad u tiro badan, balse ay u baahan tahay ciidan kooban oo tayo leh. Xisbiga UPD, kaddib markii uu qiimeeyay xaaladda dalka, wuxuu qabaa in qaabka loo tayeyn karo ciidanka ay sidan tahay:
Tiro ahaan, afarta sano ee soo socota, Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan millatari ah, oo aan ka badneyd 50,000 (konton kun), iyadoo afarta xigtana aan gaarsiin karno 75,000 halka 2030-kana aan gaarsiin karno 100,000. Ugu yaraan 10% kamid ah ciidanka millatariga waa inay commandos ahaadaan, howlaha gaarka ahna qaban karaan.
Tayeynta ciidanka waxaa saldhig u ah:
Inay ka kooban yihiin Soomaali oo dhan, dalka oo dhanna joogaan
Tababar xagga jirka ah iyo xagga farsamada ah
Tarbiyo xagga wadaninimada iyo akhlaaqda wanaagsan
Qalabeyn dhammeystiran oo casri ah
Mushaar macno leh oo aan soo daaheyn
La xisaabtan joogto ah oo heerka unugga gaarsiisan
Xuquuq askariga intuu waajibkiisa ku jiro, iyo marka uu dhammeysto waajibkiisa, iyo marka ay dhibaato soo gaarto askariga.
Buunbuunin howl-karnimada ciidanka iyo mudnaan siin.
Xisbiga UPD wuxuu qabaa in booliisku ay u kala baxaan kuwa federal ah iyo kuwa heer dowlad goboleed ah. UPD waxay aamisan tahay in booliiska federaalka ah ay shaqadoodu ay tiradoodu aysan ka badan 20,000 afarta sano ee soo socta, iyadoo 50,000 la gaarsiinayo 10 sano kaddib. Waajibka booliiska federaalka ahna uu noqdo inuu ilaaliyo dastuurka dalka iyo inuu baaritaan ku sameeyo dambiyada federaaliga ah (ee lagu caddeeyo sharciyada dalka). Booliiska federaalka ah waa inuu noqdaa mid sharci ahaan madax bannaan, oo aan siyaasadda lug ku laheyn, maadaama uu yahay ilaaliyaha dastuurka.
Xasbigu wuxuu qabaa in hey’adaha booliiska la hoos-geeyo Wasaaradda Cadaaladda, maadaama waajibkoodu yahay ilaalinta sarreynta sharciga dalka.
Booliiska dowlad-goboleedyada tiradiisu waxay ku xirnaaneysaa dowlad-goboleedyada, waana inuu noqdaa mid waajibkiisu ku egyahay inuu ilaaliyo dastuurka dowlad goboleedka, badbaabada shacabka, isla markaana uu hoos tagaa booliiska federaalka ah. Booliiska gobolka waa inuu noqdaa mid madax bannaan.
Xisbiga UPD wuxuu qabaa in hey’adda sirdoonka qaranka ay noqoto mid madax bannaan oo aan siyaasadda soo fara gashan, ayna u kala baxdaa labo laamood, oo midna ay uruurisaa sirta qaswadayaasha gudaha, iyo midda kalena uruurisaa xogta cadowga Soomaaliya ee dibadda.
Qiyaas ahaan, UPD wuxuu rumeysan yahay in loo baahan yahay illaa 10,000 oo sarkaal oo nabad sugid ah, intooda bandanna ay noqdaan kuwa aan summadooda la ogeyn.